Jona 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 Zvino shoko raJehovha rakatanga kuuya kuna Jona+ mwanakomana waAmitai, richiti: 2 “Simuka, uende kuNinivhi+ guta guru, urizivise kuti kuipa kwavo kwasvika pamberi pangu.”+ 3 Asi Jona akasimuka, akatizira kuTashishi+ kuti abve pamberi paJehovha;+ uye akazosvika kuJopa,+ akawana ngarava yaienda kuTashishi. Naizvozvo akabhadhara mari yacho yokufamba, akapinda mukati mayo, kuti aende navo kuTashishi, abve pamberi paJehovha. 4 Zvino Jehovha akatuma mhepo huru pagungwa,+ pagungwa pakava nemhepo huru ine mvura;+ uye ngarava yacho yakanga yava kuda kuparadzwa. 5 Vafambisi vengarava vakatanga kutya, mumwe nomumwe akashevedzera kuna mwari wake+ kuti vabatsirwe. Vakaramba vachikanda zvinhu zvaiva mungarava mugungwa, kuti vairerutsire.+ Asi Jona akanga apinda mukatikati mengarava yacho, akabva arara, akafa zvake nehope.+ 6 Mukuru wengarava akazoenda pedyo naye akati kwaari: “Iwe munhu akarara, waita seiko? Muka, shevedzera kuna mwari wako!+ Zvichida Mwari wechokwadi acharatidza kuti ane hanya nesu, tikarega kuparara.”+ 7 Vakatanga kutaurirana vachiti: “Uyai tikande mijenya,+ kuti tizive kuti imhosva yaani yaita kuti tiwirwe nedambudziko iri.”+ Vakaramba vachikanda mijenya, mujenya ukazobata Jona.+ 8 Naizvozvo vakati kwaari: “Tapota, tiudze, imhosva yaani yaita kuti tiwirwe nedambudziko iri?+ Unoita basa rei, uye unobva kupi? Unobva kunyika ipi, uye unobva kuvanhu vapi?” 9 Iye akabva ati kwavari: “Ndiri muHebheru,+ uye ndinotya+ Jehovha Mwari wokumatenga,+ Iye akasika gungwa nenyika yakaoma.”+ 10 Zvino varume vacho vakatanga kutya kwazvo, vakati kwaari: “Wakaitei?”+ Nokuti varume vacho vakanga vaziva kuti akanga achitiza pamberi paJehovha, nokuti akanga avaudza. 11 Vakazoti kwaari: “Tokuitei,+ kuti gungwa ridzikame nokuda kwedu?” Nokuti gungwa rakanga richingoramba richipengeswa nemhepo ine mvura. 12 Naizvozvo akati kwavari: “Ndisimudzei mundikande mugungwa, uye gungwa richadzikama nokuda kwenyu; nokuti ndinoziva kuti mhepo huru iyi ine mvura yauya pamuri nokuda kwangu.”+ 13 Asi varume vacho vakaedza kukwasva nesimba, kuti vadzose ngarava kunyika yakaoma; asi vakatadza, nokuti gungwa rakaramba richingopengeswa kwazvo nemhepo ine mvura richivadzivisa.+ 14 Zvino vakashevedzera kuna Jehovha vakati:+ “Aa, tapota haiwa Jehovha, ngatirege kuparara nokuda kwomweya womurume uyu! Haiwa Jehovha, musaisa ropa risina mhosva patiri,+ imi zvamaita maererano nezvamada!”+ 15 Vakabva vasimudza Jona, vakamukanda mugungwa; uye gungwa rakatanga kudzikama pakushatirwa kwaro.+ 16 Varume vacho vakatanga kutya Jehovha kwazvo,+ vakabayira chibayiro kuna Jehovha,+ vakaita mhiko.+ 17 Zvino Jehovha akaita kuti hove huru imedze Jona,+ zvokuti Jona akava mudumbu rehove yacho kwemazuva matatu nousiku hutatu.+